भिडियो समाचार : विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन रोक, गुप्तचरलाई फोन ट्यापिङ गर्न दिने सहमति | Ratopati
भिडियो समाचार : विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन रोक, गुप्तचरलाई फोन ट्यापिङ गर्न दिने सहमति
सरकारले बिदेशमा भिसा सकिएर नेपाल फर्कन चाहने नागरिकलाई पनि नेपाल प्रवेश गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका प्रवक्ता नारायण विडारीले भिसा सकिएका नेपालीलाई समेत अप्रिल १२ सम्म नेपाल आउन नदिने स्पष्ट पारेका हुन् ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले आपूर्ति व्यवस्थापन, तथा व्यवसायीलाई परेको अप्ठेरो हेरेर अर्थमन्त्रालयले काम गर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि १ महिनादेखि पूर्वतयारी गरेको बताए । सरकारले सुरुमा हवाईमार्ग व्यवस्थापन गर्दै हालसम्म १ सय ४१ सिमा स्थलमार्गमा सवाधानी अपनाइएको जानकारी गराए ।
यसका साथै आइसियु बेड, स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने उपकरण, औषधी, क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन वार्डको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । कोरोना रोकथामका लागि निजी स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरेको पनि उहाले जानकारी दिए ।
छिमेकी देशले उपकरण तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने बताएको उल्लेख गर्दै बजार व्यवस्थापन गर्न कालोबजारी गर्नेलाई समातिरहेको बताए ।
कोरोनाबाट सबैभन्दा छिटो पर्यटन ब्यवसाय, हवाई क्षेत्र, होटल, ह्यान्डीक्राफ्ट व्यवसाय प्रभावित भएको बताउँदै उहाले छिट्टै पर्यटन व्यवसाय आफ्नै लयमा फर्कने विश्वास ब्यक्त गरे ।
फ्रेबूअरी र मार्चमा भएको पर्यटनको क्षतिलाई अफसिजनमा छिमेकी देशबाट पर्यटक ल्याएर पूर्ति गरिने उनले बताए । होटल व्यवसायीलाई ऋण तथा अन्य वित्तिय समस्या समाधान गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
नागरिक सुरक्षाका लागि वैदेशिक रोजगारी तत्काल रोकिएको बताउदै विदेशबाट नेपाल फर्किनेलाई पनि रोकिएको र विदेश जान रोकिएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा सुचिकृत हुन आग्रह गरे ।
आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था परिनसकेको उनको भनाइ छ । केही विकासका आयोजनामा चिनियाँ कामदार स्वदेशमा रोकिएका कारण केही समयपछि फर्कने र आयोजनाको काम अघि बढ्ने उनको विश्वास छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा संक्रमण फैलिने चेतावनी दिएको र अभिभावकहरुले पनि परीक्षा सार्न गरेको आग्रह पछि पठनपाठन र परीक्षा सारिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
नेकपाका शीर्ष नेता ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा !
त्यसैगरी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उपभोक्ताहरुकै कारण बजारमा केहि समस्या देखिएको बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भट्टले कोरोनाको सन्त्रासकाबीच जनताहरुले आवश्यकता भन्दा बढि उपभोग्य वस्तुहरु खरिद गर्ने र भण्डारण गर्ने कार्य गरेकाले बजारमा समस्या देखिएको बताए । यस्तो असहज परिस्थितिमा अभाव रोक्न जनताहरु आफै सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै भट्टले सरकार जनताको घरघरमा गएर छापा मार्न नसक्ने बताए ।
उहाले अहिले बजारमा आपूर्तिको कुनै समस्या नभएको र सबै सहज र सरल नै भएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टले अहिले सरकारसँग ४ देखि ६ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न, ८ महिनालाई पुग्ने औषधि, १० महिनालाई पुग्ने नुन र ३ महिनालाई पुग्ने चिनी मौजाद रहेको बताउदै आत्तिहाल्नु नपर्ने बताए ।
अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या पनि त्यस्तो ठूलो समस्या नभएको बताए । केहि पेट्रोल पप्पहरुमा सरकारी र निजी सवारीहरुको चाप लाग्ने हुँदा लाइन देखेर केहि समस्या भए जस्तो देखिएको तर त्यस्तो समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।
यता, ग्यासको सन्दर्भमा प्रतिमहिना २९ हजार मेट्रिक टन मात्र ग्यासको खपत हुने गरेकोमा सरकारले यहि समयमा ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गरिसकेको बताए ।
ग्यासको विकल्पमा सरकारले जनतालाई विद्युतिय इन्डक्सन चुलो समेत प्रयोग गर्न प्रोत्सान गर्ने गरि कार्यक्रम संचालन गरिसकेको बताए ।
बजार अनुगमनको विषयमा प्रष्ट पार्दै मन्त्री भट्टले सरकारले वाणिज्य विभाग, निजी क्षेत्र उपभोक्ता हित संरक्ष सम्बध निकायहरुसँग मिलेर बजार अनुगमन गरिरहेको र बजार अनुगमनबाटै सरकारले चैत सम्ममा खराव काम गर्ने व्यवसायीहरुलाई ५६ लाख ३० हजार जरिवाना गरिसकिएको जानकारी दिए ।
यस्तो विसम पस्थितिमा हतोसाहित नभएर सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्ने मन्त्रीको भनाई छ । यसमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने समेत मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।
यता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण पठनपाठन बन्द गर्नुका साथै हाललाई परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्वविद्यालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको त्रासलाई ध्यानमा राख्दै अनिश्चितकालसम्मका लागि पठन पाठन र यसअघि तय भएका परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विश्वविद्यालयको आजको लागि तय भएको परीक्षा भने निर्वाधरुपमा सञ्चालन गरेको थियो । हिजै सरकारले एसइइलगायतका सम्पूर्ण परिक्षा सार्ने र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पठन पाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम समिति
गृह मन्त्रालयले भारतीय सीमा क्षेत्रबाट कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कोरोनाको वस्तुस्थिति, पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको बैठकले उत्तरतर्फका नाकाभन्दा दक्षिणका नाकाबाट जोखिम बढेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
भारतमा तिव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने तर्फ सचेत रहनुपर्ने र सीमा नाकामा हुने चेकजाँचलाई थप कडाई गर्नुपर्ने निष्कर्ष कार्यकारी समितिको बैठकको छ ।
अफवाह फैलाउने र अनर्गल प्रचार गरेमा १ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद हुने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी धेरै सेवाग्राही जमघट हुने सरकारी कार्यालयहरु समेत केही समय बन्द गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वभरी करिब ९ हजारको मृत्यु भएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन् । सरकारले चैत महिनामा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले कोरोना भाईरस संक्रमणबाट जोगिन सरकारले गरेको कामको प्रसंम्सा गर्दे राजनीतिक दल, संघसंस्था, उद्योग व्यवसायी, नागरिक समाज लगायत सबै निकायसंग मिलेर थप रणनीति बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको विहिबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले कोरोना भाईरस संक्रमणको संकटको सामना गर्न सबैसंग हालेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य गोपी बहादुर सार्की अछामीले दक्षिण पूर्वि एसियामा तिव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट तयारी गरिरहेको भएपनि त्यो पूर्ण नभएको बताए । उनले कोरोना भाईरस संक्रमणले निम्त्याएको चुनौतीको सामना गर्न सरकार, राजनीतिक पार्टी र सबै जनता एक भएर सजकता अपनाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा बोल्दै अन्य राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले पनि कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सरकारले गरेको प्रयासको प्रसंम्सा गर्दै संकटको सामना गर्न सबैलाई हातेमालो गर्न आग्रह गरेका थिए । सदस्यहरुले वर्तमान संकट समाधानका लागि सरकारको एक्लो प्रयास मात्रै प्रभावकारी नहुने भन्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
संसदहरुको ज्वरु परीक्षण
त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको बैठक बस्नुअघि संसद भवन बाहिर राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको ज्वरो परीक्षण गरिएको छ ।
सांसदहरुलाई स्यानिटाइजरले हात धोएर मात्रै संसदभवन भित्र प्रवेश दिइएको थियो । देशकै सर्वोच्च निकायबाट केही महत्वपूर्ण कानून बनाउनुपर्ने बाध्यताले बैठक सञ्चालन गर्नुपरेको बताएका थिए ।
सरकारले एकै ठाउँमा २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन निर्देशन दिएपनि राष्ट्रियसभा बैठक भने सञ्चालन भएको छ । सरकारी निर्णय सरकारी तहबाटै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सबै धर्मावलम्बीहरुलाई धार्मिक गतिविधि सञ्चालनमा पुर्नविचार गर्न अपिल गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस (केभिड–१९)को संक्रमणको जोखिम रहेका बेला सबै धर्मावलम्बीहरुलाई संयमता अपनाउन र कार्यक्रमहरुमाथि पुर्नविचार गर्न मन्त्री भट्टराईले अग्रह गरे । सरकारले कुनैपनि सार्वजनिक सभा समारोह, ठूला भेलाहरु, जात्रा, महोत्सव, र भोजभतेर नगर्नु भन्ने निर्णय गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा ‘भरतपुर कोरोना विशेष अस्पताल’ बनाएको अस्पतालका प्राविधिक संयोजक डा. भोजराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
संक्रमित भइहाले अन्य मानिसमा नपुगोस् भनेर सतर्कता अपनाउन अस्थाई अस्पताल बनाउन लागिएको संघले जनाएको छ । कोरोनाको शंका लागेका विरामीलाई मात्र त्यहाँ राखिनेछ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालले महानगरको उद्देश्य अनुसार निर्धा्रित समयमै अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरिएको जानकारी दिइन् ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेयर दाहालले ५० वेड तयार भैसकेको भन्दै वाँकी आइसियु लगायतका बेड २,३ दिनभित्र तयार हुने जानकारी दिइन् ।
उनले उक्त अस्पतालमा भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक देशभरका विरामीलाई सेवा प्रवाह गर्न सक्ने भन्दै अस्पताल निर्माणमा सहयोग गर्ने स्थानीय जनता, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र व्यवसायीहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।
अस्पतालका प्राविधिक संयोजक अधिकारीले ७० बेडबाट विस्तार गरेर ३ सय बेडसम्मको अस्पताल बनाउन सकिने जानकारी दिए ।
कानून समितिमा सांसदहरु
सांसदहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण बालगृह र अनाथालयमा समेत पर्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कानून समितिको बैठकमा सांसदहरुले बालगृह, अनाथालाय र कारागार कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले बढी भिड हुने स्थानहरुमा बालगृह, अनाथालय र कारागार पनि रहेको भएपनि यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको भन्दै सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्नका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
सांसद बालकृष्ण खांणले शंका लागेर अस्पताल पुग्ने सबै बिरामीको कोभिड–१९ परीक्षण हुनुपर्ने बताए । उनले केही बिरामीलाई सरकारले परीक्षण नै नगरी फर्काएको समाचार आएको उल्लेख गर्दै सबैलाई परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
विधायन व्यवस्थापन समितिले विशेष अवस्थामा अदालतको अनुमतिबिना पनि फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधान सहित विशेष सेवा गठन सम्बन्धि विधेयक अन्तिम टुंगो लगाएको छ ।
समितिको बैठकले मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता लगायत विशेष विषयमा फोन ट्यापिङ गर्न अदालतको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गर्दै विधेयकलाई अन्तिम टुंगो लगाएको हो । नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अनुमतिबिना फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको हो ।
सो प्रावधानमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र अन्य विशेष कुराहरुका लागि मात्रै फोन ट्यापिङ गर्न सकिने प्रावधान राखिएको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए ।
गुप्तचर निकायलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य उद्देश्यले ल्याइएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मुख्य उद्देश्य सूचना संकलन गर्ने हो । यस्तै कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । यद्यपी उक्त प्रावधान २०७८ साउन १ गतेबाट लागु हुनेछ ।
कानून समितिको निर्देशन
कानून समितिले कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कानून समितिको बिहीबारको बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिएमा कारागारमा जटिल अवस्था आउने भन्दै कैदी बन्दीको संख्या घटाउन निर्देशन दिएको हो । समितिले अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदि बन्दी रहेकोले जोखिम उच्च रहेको जनाएको छ ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विदेशमा समेत यस्तो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयलाई यसको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरे ।
त्यस्तै समितिले कोरोना भाइरसको परिक्षणका लागि सात वटै प्रदेशमा मडिकल टिम, इक्युपमेन्ट र औषधिको प्रयाप्त व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै मास्क, औषधि लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको कृतिम अभाव र कालाबजारी भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।